Buuhoodle oo lagaga shiray tacadiyada haweenka iyo doorkooda siyaasadda iyo nabada (Dhegeyso) – Radio Daljir
Diseembar 9, 2013 5:27 b 0
Buuhoodle, December 9, 2013 – Bulshada magaalada Buuhoodle ee xaruunta gobolka Cayn ayaa lagu dhiiri-gelinayaa in ay ilaaliyaan xuquuqda haweenka iyo ka hortaga shaqaaqooyinka loo geysto iyaga iyo caruurta, sida ay sheegtay isu-duwaha wasaaradda haweenka ee gobolkaas Adna Cali.
Munaasabada maalmaha ka hortaga shaqaaqada haweenka iyo tacadiyada loo geysto oo Buuhoodle lagu qabtay maanta, ayaa lagu soo hadal qaaday wax badan oo loo baahan yahay in is-bedel lagu sameeyo, sida ay sheegeen masuuliyiin kala duwan oo kulanka ka hadlay.
Adna Cali oo ah isu-duwaha wasaaradda haweenka ee gobolka Cayn, waxay ku baaqday in haweenka laga daayo dhibaatada iyo tacadiyada loo geysto, iyadoo ugu baaqday qaybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulka intaba in ay arrintaas is bedel ka sameeyaan.
?Haweenku waa in ay ka wada-shaqeeyaan nabadda, gabdhuhu ma mudna in lagu tacadiyo waa in la dhaqaaleeyo, shareecadu islaamku waxii ay idii oggolaatay cid idika hor istaagi karta ma jirto, waa in aad ku qanacdaan wixii sharciga islaamka idika reebay.? Cabdiraxmaan Cabdulaahi oo ka mid ah saraakiisha ciidanka ee gobolka Cayn ee Puntland ayaa hadalkaas shirka ka sheegay.
Kulanka oo ay goob joog ahaayeen culimada, waxgaradka, haweenka, xubno ka socda urrurada dhalinyarada ?iyo qayabaha kale ee bulshada ayaa soo idlaaday, waxaana la isku raacay in dumarku ay qayb wayn ka noqdaan xasiloonida iyo ka shaqaynta nabadda, iyadoo sidoo kale laga soo saaray kulanka in laga fogaado tacadiyada haweenka loo geysto
Dhegeyso: – war-bixin uu kulanka ka diyaariyey Mahad Kilwe oo daljir ka tirsan
Baahin: Isniin, 9 Dec 2013, Caawa Iyo Daljir Weriye Macamed C Cali (Kooshin) ~ Daljir ~ Garowe